Editorial Comment: ED borrows from Mugabe rule book - The Standard
You are here: Home › Editorial Comment: ED borrows from Mugabe rule book
Editorial Comment: ED borrows from Mugabe rule book
February 3, 2019 in Editorial
President Emmerson Mnangagwa’s claims that Western countries were behind the violent protests that rocked Zimbabwe a fortnight ago raised fresh questions about his claims that he has broken with the past.
Mnangagwa’s successor Robert Mugabe became notorious for burying his head in the sand each time the country faced serious problems and when citizens showed discount he would blame the West.
In Mugabe’s mind, Zimbabweans didn’t have the capacity to see that they were misgoverned and needed foreigners to push them to challenge his authority.
A fortnight ago, a Zimbabwe Congress of Trade Union’s call for a three-day stay-away to protest against a steep increase in fuel prices was heeded by the majority of workers, bringing the economy to a standstill.
The government’s response to the violence has received global condemnation with the United Nations weighing in last Friday by calling for investigations into “reported cases of violence, rape and incidents of unlawful detention, including of minors.”
In fact, he sounded like his predecessor when he said “we have told the western countries that they cannot turn around and raise concerns when they are the ones sponsoring the violence.”